के तपाइलाई सर्पको छालाबाट बनेको पुरानो जापानी बाजा थाहा छ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > के तपाइलाई सर्पको छालाबाट बनेको पुरानो जापानी बाजा थाहा छ?
सानशिन किन्नु भनेको आर्टिस्ट हुनु हो भन्ने जापानमा उखान छ। सानशिन जापानी पारम्परिक बाज हो जुनलाई एसेम्बल गर्न धेरै समय लाग्दछ। यो बाजा बजाउने तरिका निकै पुरानो र गाह्रो छ। तर यो बाजाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हजुरलाई थाहा छैन होला। ओकिनावामा यो बाजालाई आरामदायी र टेन्सन कम गर्ने माध्यमको रुपमा लिईन्छ। यो ईतिहासको बाजा भने होइन। तर ओकिनावामा यसको निकै ठूलो महत्व छ।
के हो त सानशिन ?
सानशिनको शाब्दिक अर्थ तिन वटा तार हो। यसको उत्पति ओकिनावाबाट भएको हो। यसलाई बेन्जो संग पनि तुलना गरिन्छ तर बेन्जो भने ४,५, वा ६ तार हुने गर्दछ। सानशिन सर्पको छालाले ढाकिएको हुन्छ। घाटीको भाग भने एउटै काठबाट बनाइएको हुन्छ। हेर्दा खेरि यो चिनको सान्सियाँ बाजा जस्तै हुन्छ। यसले यो बाजाको सर्ब प्रथमको उत्पति चिनबाट भएको संकेत गर्दछ। पहिले पहिले यो बाजा राजा महाराजाको लागि मात्र बजाइने गरिन्थ्यो। सन् १५६० तिर ओकिनावाको यो बाजा ओसाकामा पनि बजाउन थालिएको बताइन्छ।
पहिले पहिले यो बाजाको जिउ अजिङ्गरको एक ठूलो प्रजातिको छाला प्रयोग गरि ढाकिन्थ्यो। तर अचेल जगली अजिङ्गरको प्रयोगमा बन्देज लगाइएपछि धेरै जसोले अजिङ्गरलाई ब्यबसाइक रुपमा पालना थालेका छन। पसलहरुले सजिलो र सस्तोको लागि प्लास्टिक पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। जापानबाट बाहिर लान नमिल्ने भएर पनि प्लास्टिकको प्रयोग गरिएको हो।
बाजाको तार, ती बाँसको माध्यमबाट साँपको छालाको शरीरबाट उठाइन्छन्। ताराको रंग या त सेतो वा पहेलो हो र तिनीहरू मोटाई अनुसार विभिन्न ओकिनावान नामहरूमा आउँछन्। सबैभन्दा मोटो स्ट्रिंग नर स्ट्रिंग हो जसलाई “उउजीरू” भनिन्छ। बीचको स्ट्रिंगलाई “नाकाजीरू” भनिन्छ, जबकि पातलोलाई मादा स्ट्रिंग हो र यसलाई “मिइजुरु” भनिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट गितार पिक वा औला प्रयोग गरेर बजाउन सकिन्छ। परम्परागत रूपमा, बाधकहरु औंलामा “बाची” भन्ने सानो उपकरण लगाउँदथे।
एक स्यानशीन शिल्पकारका अनुसार सनसिन बनाउने कला भनेको बच्चा जन्माउने जस्तो हो। यो धेरै जटिल छ र पूर्ण हुन केहि हप्ता लिन सक्दछ। यो महँगो पनि छ किनकि यो १०,००० डलरसम्म पर्न सक्दछ। यो अनुमान गरिएको छ कि ओकिनावामा त्यहाँ लगभग व्यावसायिक परम्परागत स्यानशीन शिल्पकारहरू मात्र बाँकी छन्। ती सबैलाई उपकरण राम्रोसँग बनाउने पुरानो चलनहरू थाहा छ। उनीहरुलाई मात्र थाहा छ कसरी त्यो उपकरणमा सहि ब्यालेन्स मिलाउने भनेर।
यद्यपि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, ओकिनावाबासिले खाली टिन क्यान र काठको एक टुक्रा प्रयोग गरेर उपकरणको अस्थायी संस्करणहरूको सहारा लिए। यसलाई “कंकारा” वा “कंकरा सान्शीन” भनिन्थ्यो। यसले सम्भावित सानशिन बाटो प्रशस्त बनायो।
जापानमा धेरै सानशिन बनाउने कम्पनिहरु छन्। एउटा प्रमुख कम्पनि रिसोर्ट इन्स्ट्रुमेन्ट फ़्याक्टरि हो। उनीहरु होनगावा सानशिन बनाउछन तर पनि यसको मूल्य धेरै महँगो हुदैन। यो कम्पनीको सानशिनमा इण्डिकेटर पनि हुन्छ, तेसैले हजुर यदि गितार बजाउनु हुन्छ हने यो बाजा पनि थोरै त्रेनिंगले बजाउन सक्नु हुन्छ।
सानशिनको आवाज पसलमा बेच्ने सस्तो र प्रोफेसनलले बनाएको धेरै भिन्न हुन्छ। धेरै जसो समय, जब तपाई साँपको छालालाई सुदृढ पार्नका लागि परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, आवाजको नतीजा फरक हुन्छ। दुई खालका काठको फ्रेम भार फैलाउन उच्च बलको प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। त्यसपछि यो एक अधिक जीवन्त टोनमा परिणाम हुन्छ।
सानशिनको ५ प्रकारको ट्युनिङ्ग हुन्छ जसलाई चिन्दामी भनिन्छ
१. हों चोशी : स्ट्याण्डर्ड ट्युनिङ्ग
२. इची-आगि चोशी : पहिलो तार ट्युनिङ्ग
३. नि- आगि चोशी : दोश्रो तार ट्युनिङ्ग
४. इची, नि- आगि चोशी : पहिलो वा दोश्रो तार उठाएको ट्युनिङ्ग
५. सान-सागी चोशी : तेस्रो तार ट्युनिङ्ग
यदि हजुरयो बाजामा पोख्त हुन चाहनु हुन्छ भने ओकिनवको गित पनि याद गर्नु होस्। यो सानशिन निकै कम मात्र बन्ने हुदा हजुरले निकै अघि बाट यसको बुकिङ्ग गर्नु पर्ने हुन सक्छ। केहि कम्पनीले यसको वारेन्टी ५ बर्षको दिएको हुन्छन भने कहिले मात्र एक वर्षको हुन्छ।
यदि हजुरलाई सानशिनको संगीत सुन्न मन छ भने तलको भिडियो हेर्नु होस्।